Ngokuhamba kwesikhathi, ama-computer kanye laptops ayaqala ukusebenzisa kancane kancane kunalokho elaliyikho ngokushesha emva kokuthenga. Ukuhlenga le simo, kubalulekile ukuba bamukele eziningi izinyathelo ezithile. Ikhompyutha kufanele uqale zigezwe. Njengamanje, ithuthukiswe inqwaba izinhlelo yakhelwe nokwandisa uhlelo lwakho PC. Nokho, isofthiwe third-party ukulanda ezimweni eziningi akudingekile. Zingase zihlanzwe kanye kusho OS uqobo. Ukuze ufunde indlela yokukwenza, futhi sizobe ukukhuluma kamuva kulesi sihloko.
Yini defragmenting kudiski?
Ngaphambi siqala ngenela umbuzo kanjani defragment kukhompyutha yakho, ubone ukuthi kuyinto.
Kuqondane nokuthi ifayela azinakulondolozeka kuya disk futhi lonke uhlelo iphula phansi zibe yizicucu ehlukile. Ngezinye izikhathi zilotshiwe esilandelayo, futhi ngezinye izikhathi ehlakazekile emhlabeni hard drive. Ngisho noma ifayela kamuva isusiwe, kudiski wenziwe iinqetjhana. Futhi kulapho-ke khulula kusuka ezindaweni ezifana ulwazi, kancane izosebenza. Ngakho, futhi kunciphisa ukusebenza kohlelo. Ukuze kuxazululwe le nkinga, defragment.
Indlela defragment idiski Windows 7?
Ngakho, indlela "windose 7" ukuze defragment? Le nqubo kuleli cala silula. Kumele uchofoze ibhokisi lokuhlola "Qala." Okulandelayo, khetha "Computer" yezinhlamvu. Lokhu kuzoletha uhlu ngemoto usuka kuyo ukhethe wayefisa. Kulandelwe ngokuchofoza kuyo (inkinobho yegundane kwesokudla) futhi uye kuthebhu "Properties", bese ku "Amathuluzi" sigaba. Ungenza izenzo ezintathu ezahlukene - hlola disk amaphutha, amafayela ingobo yomlando ezigcinwe kuyo, futhi defragment. Kumele cindezela inkinobho esihambelanayo. Ngemva kwalokhu, isikrini izoveza omunye imenyu. Lapha ungakwazi sihlaziye disk, enze defragmentation uqobo, kanye ukusetha i-schedule. Into yokuqala ukwenza ukuhlaziya disk. Ngemva kwalokho, uma kunesidingo, kumele defragment. Njengoba ubona, umbuzo kanjani "windose 7" ukuze defragment, hhayi kuyinkimbinkimbi kakhulu. Inqubo ngokwaso ingahlala kusuka imizuzu embalwa kwamahora ambalwa. Kodwa ngokuvamile kuba ikakhulukazi isikhathi esiningi akuthathi.
Ngokuvamile, isheduli defrag Windows 7 isivele isethiwe. Lokhu nokwenza wenziwa ngokuzenzakalelayo, ngokuvamile kanye ngesonto. Kodwa setha isimiso sakho uma ufisa, ungakwazi ngokuzimela. Ukuze wenze lokhu, chofoza "isheduli Lungiselela". Ngemva kwalokho kwelinye iwindi kuzovezwa. Lapha ungakhetha lokuvama komsebenzi. Ngemva chofoza umcibisholo ku umugqa "Imvamisa" menu, khetha umugqa "Masonto onke", "Nsuku zonke" noma "yanyanga zonke" (ngokuchofoza umcibisholo). Kodwa okuhle nakakhulu wukuthi ukulishiya njengoba.
Ngo emgqeni olandelayo ungakhetha suku, ngesonto noma ngenyanga, okuzokwenza defragment kudiski, kanye isikhathi esithile sokuthandaza phakathi nosuku. Esikhathini sendaba, setha drive efanele. Ngakho, indlela "windose 7" ukuze defragment, sithole.
Kanjani ukwenza lo msebenzi ku-Windows XP?
Inqubo kulokhu nsé nezinqubo Disk Defragmenter ukuba "windose 7". Iya "Computer yami" bese uchofoza kudiski kudinga ukulungiselelwa kwesokudla. Ngaphezu kwalokho, "Properties" - "Amathuluzi". Esikhathini "Defragment" kumelwe ukhethe "Defragment." Manje uqonde indlela ukwenza defragmentation ku-Windows XP. Ngokwenza le nqubo, ngaphezu sinake ikholomu "% isikhala." Kuleso simo, uma isikhala idiski lingaphansi kuka-15%, kubalulekile ukwenza okwengeziwe bese uhlanza it by egijima Umbuso ezifanele.
Njengoba "windose 7" ukuze defragment, yebo. Manje ake sibone ukuthi ukuhlanza idrayivu. Lapho usebenza zonke izinhlobo udoti aqoqana ohlelweni - ezingadingekile noma amafayela esikhashana, izinsalela emva kokukhipha. Ngenxa yalokho, i-computer uqala sokuhudula izinyawo lesi. Ukuze ukhiphe zonke engadingekile futhi inqubo enjalo kuyadingeka njengoba disk wokuhlanza. Ukuze wenze lokhu, hamba ngokusebenzisa "Qala" imenyu - "Izesekeli" - "Amathuluzi esistimu" bese uchofoza "Disk lokuhlanza" umugqa.
Ngemva kwalokho, imenyu livela lapho ukhetha disc. Okulandelayo, isicelo izophakamisa uhlu lwamafayela ezingadingekile. Lo msebenzi e "windose 7" futhi "XP" efanayo. Ngo "windose 8" kudingeka chofoza inkinobho "Ukucinga" ekhoneni elingezansi kwesokudla kudeskithophu. Khona-ke, e-Kwiwindi ukuphrinta "Disk lokuhlanza" (ngaphandle izingcaphuno) bese uchofoze esikhombe isithonjana. Okulandelayo udinga ukuya "ngokususa amafayela ezingadingekile, ukukhulula sediski" ewindini esivula, ngaphansi lento. Uhlelo-ke yenza ukuba ukhethe disc, bese uyonika uhlu amafayela ngokubona uhlelo kumele zisuswe.
Indlela defragment ku "windose 8"?
Ngo "windose 8" Disk Defragmenter kwenziwa kancane ehlukile kuka e "windose 7" futhi "XP". Ukuze wenze lo msebenzi, njengoba kwaba njalo endabeni ka-yokuhlanza, chofoza "Ukucinga" inkinobho. Emkhakheni wezingalo ibinzana "Disk Defragmenter" Kumele kwetfulwe ngalesi sikhathi. Ngemva kwalokho, uhlu udinga ukuya nto "Disk Defragmenter" futhi kamuva esigabeni "yamanje isimo" ukhetha idrayivu. Ukuze uqinisekise isidingo defragmentation, kufanele chofoza "Ukuhlaziywa". Ngezinye izikhathi ke ohlelweni ucela iphasiwedi nomqondisi. Kulokhu, kufanele yethulwe. Uma ukuhlaziywa kuqedile, kudingeka sibheke ikholomu "Kugcine Run". Esimweni lapho kudiski phambi lingaphezulu-10%, defragmentation kumele kwenziwe. Ukuze wenze lokhu, chofoza "Defragment." Ngokulandelayo, OS uyokwenza konke yena. Ngakho, impendulo yombuzo othi mayelana nendlela defragment ku "windose 8", it is engeyona inkimbinkimbi. Le nqubo akuyona okuningi ezahlukene kusukela efana "windose 7" futhi "XP".
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi amafayela inethiwekhi ayikwazi defragmented. Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi "isimo samanje" we disc oyifunayo kungaveli. Ngokuvamile, lokhu kusho ukuthi liqukethe isiphi isiphambeko. Ukuze wenze zonke izinyathelo ezidingekile ukuze nokwandisa uhlelo, pre-isidingo uzame uyithole.
Ngakho, uzoba siye esiphethweni kanjani ukwenza disk defragmentation ku-Windows 7, 8 ne-XP. Ukuze wenze lokhu, sasingadingi ngempela ukuba uhlelo third-party. Konke kungenziwa esebenzisa OS uqobo.
Yini okumele uyenze uma ungenawo ukulayisha ideskithophu?
I umhlakanya ukuqalisa Loader: ekubuyiseleni OS
Kuqondiswe ngu Ulrih Zaydl: Biography, Filmography
Ikhekhe elimnandi nge amajikijolo fresh
Ukuhlanza amafutha izicupho: isimiso umsebenzi nokulaywa
Art. 56 Ikhodi-Criminal Procedure, njengoba uchitshiyelwe